Guddiga Hawlaha Guud ayaa ansixiyay maalgelinta Deymaha Dhismaha iyo Dhismaha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Hawlaha Guud ayaa ansixiyay maalgelinta Deymaha Dhismaha iyo Dhismaha
In ka badan $ 123 milyan oo abaalmarino ah oo la siinayo bulshooyinka maxalliga ah ee gobolka oo dhan
OLYMPIA, Dhaq. - Kulankoodii guddiga ee 6 -dii Ogosto, the Guddiga Howlaha Guud ee Gobolka Washington oggolaaday maalgelinta Barnaamijyadooda Dhaqan ee Deynta Dhismaha iyo Dhismaha ka hor. Lacagtani waxay ka faa'iideystaan ​​bulshooyinka maxalliga ah ee wax ka qabanaya kaabayaasha lix nidaam oo kala duwan: waddooyin iyo waddooyin, buundooyin, biyaha gudaha, biyaha duufaanta, bullaacadaha fayadhowrka, iyo qashinka adag iyo dib -u -warshadaynta.
Amaahda Dhismaha Hore: Qeybtaan, maamulada waxay soo gudbiyeen toddobo arji codsi guud oo ah $ 3,154,520. Lix ka mid ah codsiyada ayaa dhaafay heerka dhibcaha ugu yar waxayna u qalmeen abaalmarinta. Guddiga Hawlaha Guud ayaa ansixiyay maalgelin buuxda dhammaan codsiyada u qalma oo dhan $ 2,979,000.
Amaahda dhismaha: Qeybtaan, maamulada waxay soo gudbiyeen 68 codsi dalab dhan $ 252,201,253. Toddoba iyo toddoba codsi ayaa maray heerka ugu hooseeya ee dhibcaha waxayna u qalmeen maalgelinta. Guddiga Hawlaha Guud wuxuu tixgeliyey liiska codsiyada la qiimeeyay oo la qiimeeyay, wuxuuna oggolaaday codsiyada u -qalma ee maalgelinta illaa dhammaan lacagihii la heli lahaa ay dhammaadaan. Tani waxay awood u siisay Guddigu inuu bixiyo 38 mashruuc oo dhisme ah, abaalmarin dhan $ 120,533,659.
Guddoomiyaha Guddiga Kathryn A. Gardow ayaa sheegtay, “Ansixinta maalgelinta mashaariicda kaabayaasha dhammaan gobolka oo dhan waa maalin ku weyn reer Washington! Sharci -dejintu waxay u oggolaatay Guddiga Hawlaha Guud in ay ku bixiyaan doollarka dawladda qaaliga ah si ay u dhisaan, u hagaajiyaan una ilaaliyaan biyaha bulshooyinka, bullaacadaha, biyaha duufaanka, waddooyinka, buundooyinka, iyo nidaamyada qashinka adag, kuwaas oo dhammaantood aad muhiim ugu ah caafimaadka dhaqaale ee gobolkeenna iyo laf -dhabarta bulshooyinka caafimaadka qaba, nabdoon, oo firfircoon. Waxaan ku faraxsannahay inaan sii wadno shaqada socota ee aan la wadno hay'adaha aan bahwadaagta nahay iyo bulshooyinka gobolka oo dhan si aan u noqonno maalgelin la isku halleyn karo iyo ilaha gargaarka farsamo si loo ilaaliyo caafimaadka nidaamyada kaabayaasha ee gobolkeenna. ”
Guddiga Hawlaha Guud ayaa durba bilaabay diyaarinta codsi miisaaniyad dheeri ah oo loogu talagalay fadhigan sharci -dejinta. Dhexdeeda, waxay ku codsanayaan maalgelin dheeraad ah si ay u bixiyaan wareegga dhismaha sanadka soo socda.
Liiska liiska codsadayaasha, guji Dhismaha Hore or dhismaha.
Deeqaha bulshada iyo amaahdaWar-saxaafadeedGuddiga Howlaha Guud
← 80 barnaamijyo cusub oo lagu aaminay Ganacsiga ayaa ballaarinaya mas'uuliyadaha wakaaladda iyo saameynta Xeerka Dhibanayaasha Dambiyada (VOCA) Fix to Sustain the Crime Victims of Crime →